मोबाइल - हाम्रो समय प्रभु | Apg29
अब यसलाई नयाँ राष्ट्रिय रोग ध्यान केन्द्र
धेरै मानिसहरूले मोबाइल फोन दास भएका छन् र यो वरिपरि अन्य तरिका हुनुपर्छ, यो नियन्त्रण र शासन छ, र यो बिरामी छ।
अब यसलाई नयाँ राष्ट्रिय रोग ध्यान केन्द्रित गर्न समय।
के हामी सोच्न मोबाइल फोन को hysterical प्रयोग हो।
यो कि प्रतिक्रिया को धेरै, हामी रोग लागि यो सिंड्रोम कल सम्भव छ, तर यो तरिका एक अत्युक्ति छ।
तथ्यलाई मोबाइल फोन implies सबै संग साइबर संसारमा, अनुमति सर्फ र प्रत्यक्ष हामीलाई निरन्तर जोडिएको हुन छ। यो धेरै सम्पत्ति छ, तर त्यहाँ एक नकारात्मक छ: धेरै मोबाइल फोन प्रयोग निषेध गर्न सक्दैन।
बरु यो प्रयोगकर्ता सुविधा एक उपकरण हुन सक्छ, यो धेरै जीवन को एक मास्टर भएको छ। धेरै मानिसहरूले मोबाइल फोन दास भएका छन् र यो वरिपरि अन्य तरिका हुनुपर्छ, यो नियन्त्रण र शासन छ, र यो बिरामी छ।
केही वर्ष पहिले यो एक मानसिक रोग, इन्टरनेट लत भनिन्छ कारण वर्गीकृत भएको थियो। यो "निदान" 2008 मा Psyhiatry को अमेरिकी जर्नल मा प्रकाशित भएको थियो।
तब देखि, यो निर्भरता समयमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या एकदम वृद्धि भएको छ।
कसरी यो नै प्रकट
कसरी प्रकट नै जब आरोप रोग? उसोभए, तपाईं निरन्तर तपाईं फोन प्रयोग गर्न भन्ने महसुस। यो शायद एक अत्युक्ति छ। यस पुष्टि धेरै अध्ययन हो।
समाचार औसत मा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता एक दिन आफ्नो फोन 2600 सार्दा कि (!) टाइम्स रिपोर्ट। यसमा लिन गाह्रो हुन सक्छ। तर यो पनि के छ लिङ्क भन्छन्:
युवा मान्छे को लागि रूपमा, त्यहाँ पनि राति मोबाइल फोन प्रयोग मा जानकारी छ। कुनै कम 43% भन्दा बनाउने 18-24 वर्ष को बीच जवान मान्छे बीच रात को बीचमा फोन हेर्न जो 73% गर्दै छन्। यो, Deloitte गरेको प्रमुख छानबिन अनुसार।
शायद, यो रात मा आराम र आवश्यक निद्रामा प्राप्त गर्न सक्षम रहेको छैन हानिकारक छ। छोटो समयमा, यो व्यक्ति नकारात्मक असर हुनेछ र अब अवधि मा यो सीधा हानिकारक छ कल्पित गर्न सकिन्छ।
अन्य डाटा साना बच्चाहरु अनलाइन प्रति दिन6घण्टा र किशोरीहरूको सबै9भन्दा बढी घण्टा हो भनेर देखाउन!
के गर्दा विद्यालय र निद्रामा लागि समय कटौती, डिस्पोजेबल समय बाँकी छ? यो जीवन के हो? हो, आफ्नो समय बर्बाद एक तरिका - बाल्यकाल र किशोरावस्था।
हामी दास छैन
यो फरक हाम्रो स्वास्थ्य खतरामा, वा कुरा दास हुन चाहनुभएको छैन। मसीही लागि, यो दिइएको र जीवन को लागि एक दिशानिर्देश हुनुपर्छ। यसलाई हेरचाह र ठीक समय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
कुनै फोन वा विचलित भनेर केहि - यो प्रभु समय खर्च र उहाँलाई जीवन प्रभु होस् बारेमा छ।